कालोपुलमा युवतीमाथि एसिड आक्रमण, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कालोपुलमा युवतीमाथि एसिड आक्रमण
काठमाडौं । राजधानीको कालोपुलमा बुधबार बेलुका एक युवतीमाथि एसिड आक्रमण भएको छ । पीडित युवतीको नाम जेनी खड्का बताइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार एसिड आक्रमणपछि घाइते भएकी युवतीको उपचार चावहिलस्थित ओम अस्पतालमा भइरहेको छ । घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ । एसिड कसले र किन प्रहार गर्यो भन्ने नखुलेको प्रहरी जनाएको छ । प्रहरीले आक्रमणकारीको खोजी भइरहको जनाएको छ ।